Telo volana fahatelo : Hafantoka amin’ny famitana ny fandaharam-pianarana sy famerenana -
AccueilSongandinaTelo volana fahatelo : Hafantoka amin’ny famitana ny fandaharam-pianarana sy famerenana
10/04/2018 admintriatra Songandina 0
Taorian’ny fialan-tsasatry ny paska dia miverina an-dabilio avokoa ny mpianatra, nanomboka ny 5 aprily teo, ho an’ireo tratran’ny fampiatoam-pianarana, noho ny valanaretina pesta sy rivodoza AVA. Manomboka ny telo volana fahatelo mamarana ny taom-pianarana 2017-2018. Tsy hifarana izany raha tsy amin’ny faran’ny volana jolay any ho any, ho an’ireo tsy manomana fanadinam-panjakana fa mbola mitohy kosa ho an’ireo hanao izany fanadinana izany. Fotoana fifantohana tanteraka ny telo volana fahatelo ho an’ny mpianatra raha ny fanazavan’ny mpampianatra. Hampiharana ny lesona rehetra natao hatramin’izay ity telo volana farany ity. Izany hoe, famerenana sy fizarana sisa no hatao mandritra ny telo volana hanomanana tsara ny fanadinana fifindran-kilasy, na ny fanadinam-panjakana ho an’ireo hanala CEPE, BEPC na Bakalorea.
Araka ny fanadihadiana natao tamin’ny sekoly tsy miankina, Armi School, eny 67ha dia efa vita avokoa ny ankamaroan’ny lesona rehetra fa manenjika mamita fandaharam-pianarana sisa no atao. “Vinavinaina ho vita any amin’ny tapaky ny volana mey ny fandaharam-pianarana, indrindra ho an’ireo manomana fanadinam-panjakana. Na dia teo aza ireo fahatapahan’ny fianarana vokatry ny valanaretina pesta sy ny rivodoza AVA dia tsy nanana olana amin’ny famitana ny lesona ny sekoly. Izany dia noho ny fanafohezana ny fialan-tsasatra ny mpianatra”, hoy ny filazan-dRandrianandrasana Herinirina, mpanara-maso ny sekoly tsy miankina Armi School, eny 67ha.
Soso-kevitry ny mpampianatra ny famitana avy hatrany ny enti-mody rehetra vantany vao tonga ao an-trano. Tokony hifohazana maraina kosa ny famerenan-desona. Ferana ny fijerena fahitalavitra sy ny filalaovana. Mila ampy torimaso ny mpianatra manomboka izao mba hanatsarana ny fitadidiana hiatrehana ny fotoam-panadinana. Ho an’ireo hiatrika ny adina ara-panatanjahantena, dia tokony hatao isan’andro, tsy ankijanona, ny fanomanan-tena mba tsy hanapoka ny vatana amin’ny fanadinana.
“Hazalambo”…! Noventesina sy nohobiana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey mihitsy izany fanaovana “hazalambo” ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny governemanta Tantely Andrianarivo izany ny taona 2002. Nampirisihana sy nomena vahana hanao “hazalambo” ireo mpomba ny ...Tohiny